FANOLANAN-JANAKA : Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy
Ankoatra ireo trangana herisetra mianjady amin’ny zaza tsy ampy taona tany Andapa, dia nahazoana tatitra ny Polisim-pirenena teto an-drenivohitra, omaly mahakasika ilay zazavavikely tsy ampy taona naolan’ny rainy ka bevohoka. 21 février 2020
Voasambotra, omaly alakamisy 20 febroary, teny Ankadifotsy ilay raim-pianakaviana rehefa tafatsoaka ka nokarohin’ny Polisy efa ela. Natolotra ny fampanoavana rahateo koa ny raharaha, omaly.
Lehilahy iray manodidina ny 37 taona ity nosamborin’ny mpitandro filaminana tamin’io fotoana io noho ny fanontana fady tamin-janany izao. Ny volana mey 2019 no efa naharay fitoriana ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona ao Tsaratanàna, nilaza fa zazavavy vao 15 taona no naolan’ny raim-pianakaviana tsy mataho-tody, satria dia zanany naterany ity nampiharany ny filàn-dratsiny ity. Ny rahavavin-drenin’ity zazavavy ity tamin’izay no tonga nametraka fitarainana teny amin’ny Polisy, saingy norahonan’ilay rangahy indray ka tsy nipoitra teny amin’ny Polisy intsony izy noho ny fahatahorana.
Vokatr’ ilay fanolanana nitranga anefa dia bevohoka ilay zazavavy ka teraka. Rehefa teraka ity farany dia niverina tany amin’ny Polisy indray izy nanamafy ny fitoriana sy nitantara ny zavatra nahazo azy. Tsy niandry ela ny Polisy fa avy dia nikaroka ilay rangahy ka iny tra-tehaka teny Ankadifotsy iny ny lehilahy.
Lehilahy 23 taona hita faty tao an-tranony ny sabotsy antoandro lasa teo ARANTA (193) 31 mars 2020 Lavon’ny balan’ny Polisy ny jiolahy iray, karohina ny namany FIKASANA FANAFIHANA “VILLA” (127) 31 mars 2020 Vehivavy tompona Bar iray nosamborin’ny Polisy teny 67ha TSY FANARAHAN-DALANA (114) 31 mars 2020 Nirefodrefotra indray ny baomba mandatsa-dranomaso noho ny hetsiky ny mpitari-posy TOAMASINA (101) 31 mars 2020 Tafakatra 57 hatreto ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina Covid-19 FISOROHANA NY FIHANAKY NY “CORONAVIRUS” (94) 1er avril 2020 "Fahavalo tsy hita maso ny coronavirus" MINISITRA LALATIANA RAKOTONDRAZAFY (86) 31 mars 2020